Weili wuxuu diiradda saarayaa kala duwanaanta badeecada, waxaanu rumaysanahay in baaxaddu ay tahay mid ka mid ah awoodaha asaasiga ah ee ugu muhiimsan. Bishan gudaheeda, waxaan ku haynaa 33 shay oo cusub, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xidhiidho si aad oraahdo! MAGACA QAYBTA WEILI QAYB MA JIRTO CODSIGA ABS Sensor WL-A02092 6C0927903...
Weili wuxuu diiradda saarayaa kala duwanaanta badeecada, waxaanu rumaysanahay in baaxaddu ay tahay mid ka mid ah awoodaha asaasiga ah ee ugu muhiimsan. Agoosto-2021, waxa aanu ku haynaa 25 shay oo cusub, fadlan ha ka labalabayn in aad nala soo xidhiidho si aad oraah u hesho! QAYBTA MAGACA WEILI MAYA. QAYBTA NO. Codsiga ABS Sensor WL-A04110 OE：47910...
Weili waxa ay bixisa Tesla ABS Sensor oo buuxa
Sannadkii 2020, Tesla waxa uu lahaa iibka ugu sarreeya ee batteriga-ku-xidhka iyo batteriga qaybaha baabuurta rakaabka ee korontada ku shaqeeya, isagoo qabsaday 16% suuqa-kumbuyuutarrada (oo ay ku jiraan isku-darka isku-dhafka ah) iyo 23% suuqa batteriga-korontada (kaliya koronto) . Baahida qaybaha baabuurta ee Tesla waxay kordhin doontaa sanadka soo socda ...
Walxaha cusub ee ku jira Weili Catalog - 2021-06
Weili wuxuu diiradda saarayaa kala duwanaanta badeecada, waxaanu rumaysanahay in baaxaddu ay tahay mid ka mid ah awoodaha asaasiga ah ee ugu muhiimsan. Bishan gudaheeda, waxaan ku haynaa 24 shay oo cusub, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xidhiidho si aad oraahdo! MAGACA QAYBTA WEILI MAYA QAYB MAYA CODSIGA CKP/CMP Sensor WL-C21057 OE：464193...
Kooxda Weili ee 2020 Automechanika Shanghai
Automechanika Shanghai waa bandhig firfircoon iyo dhacdada ugu muhiimsan ee warshadaha baabuurta ee Shiinaha. Waxay dhacdaa sannad kasta waxayna muujisaa dhammaan qaybaha warshadaha baabuurta oo ay ku jiraan qaybo dheeri ah, dayactirka, qalabka elektaroonigga ah iyo nidaamyada, qalabyada iyo hagaajinta, dib-u-warshadaynta, qashinka iyo ...
Skoda Abs Sensor, Vw Abs Sensor, Gaariga Abs Sensor, Audi Abs Sensor, Dareemaha xawaaraha giraangiraha xamuulka, Kursiga Abs Sensor,